आइतबार नोभेम्बर 7, 2021 |
आइतबार नोभेम्बर 7, 2021
विषय — एडम र फलन म्यान
“”जाग, हे निदाएकाहरू हो! मृत्युबाट उठ अनि तिमीहरूमाथि ख्रीष्ट चम्कुनु हुनेछ।””
उत्तरदायी पढाइ: यशैया 52: 1, 2, 9, 10	•	यशैया 54: 17	•	भजनसंग्रह 17: 15
1 जाग! जाग! हे सियोन! आफै वस्त्र लगाऊ! आफ्नो शक्ति धारण गरेर पवित्र यरूशेलेममा उभ!
1. उत्पत्ति 1 : 1, 26-28 (लाई 1st ,)
28 परमेश्वरले तिनीहरुलाई आशीर्वाद दिंदै भन्नुभयो।
2. उत्पत्ति2: 1, 6-8, 21 (लाई :)
1 यसरी पृथ्वी, आकाश र तिनीहरुभित्र प्रत्येक वस्तुको सृष्टि पूरा भयो।
21 त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई गहिरो निंद्रामा सुताउनु भयो।र उनी सुते।
3. उत्पत्ति3: 9, 10
4. उत्पत्ति4: 1
1 आफ्नी पत्नी हव्वासंग आदमको सहवास भयो अनि तिनी गर्भवती भएर एउटा छोरो कयिनलाई जन्माइन। तिनले भनिन, परमप्रभुको सहायताद्वारा मैले एउटा मानिसलाई जन्म दिएँ।
5. अय्यूब 14 : 1,6(लाई 1st ,)
1 हामी सबै मानिसहरू हौं। हाम्रो आयु छोटो अनि संकटहरूले भरिएको छ।
6 यसैले परमेश्वर, हामीलाई हेर्न छोडिदिनु हवस।
6. लूका 4: 1 (येशू) (लाई 1st,), 16-19, 21 (यो)
1 येशू यर्दन नदीदेखि र्फकिनुभयो। उहाँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुहुन्थो। त्यो आत्माले उहाँलाई उजाडस्थान तिर डोर्यायो।
16 येशूले आफु हुर्केको शहर नासरतको पनि यात्रा गर्नु भयो। विश्रामको दिनमा अघि झैं उहाँ सभाघरमा जानु भयो। उहाँ त्यहाँ केही पढनलाई उभिनु भयो।
17 यशैया अगमवक्ताद्वारा लेखिएको ग्रन्थ उहाँलाई दिईएको थियो। उहाँले ग्रन्थ पल्टाउनु भयो अनि एक ठाउँ जहाँ निम्नलिखित कुरा लेखिएको भेट्टाउनु भयोः
19 अनि घोषणा गर्न कि आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउन परमप्रभुको उचित समय आएको छ।
21 मैले तिमीहरू अघि जो धर्मग्रन्थको अंश पढे त्यो आज पढदै गर्दा नै पूर्ण भयो।
7. यूहन्ना 3: 1-7
1 हाँ निकोदेमस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। तिनी फरिसीहरू मध्ये एक अनि यहूदीहरूका अगुवाहरू मध्ये एकजना थिए।
2 एक-रात निकोदेमस् येशूकहाँ आए। उनले भने, रब्बी, हामी जान्दछौ तपाईं परमेश्0वरद्वारा पठाएको एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको सहयोग बिना तपाईंले जुन चमत्कारहरू गर्नु हुँदैछ कुनै मानिसले गर्नु सक्तैन।
3 येशूले उत्तर दिनु भयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मानिस फेरि एकपल्ट जन्मनु पर्छ। यदि मानिस फेरि जन्मेन भने, त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन।
4 निकोदेमसले भने, एक मानिस जो बूढो छ, ऊ फेरि कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ पुनः आमाको गर्भभित्र दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अनि फेरि जन्मछ?
5 तर येशूले भन्नुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पानि र आत्माबाट जन्मनु नै पर्छ। यदि उ त्यसरी जन्मेन भने, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्तैन।
8. एफिसी 4: 17 (लाई 1st ,), 22 (राख्नु), 23, 24 (राख्नु)
17 म यो भन्छु ।
22 ... तिमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोडन सिकाइयो। त्यसको अर्थ, अघिका दिनहरूमा पछ्याइ हिंडेको कुमार्गलाई तिमीहरूले त्याग्नु पर्छ। त्यो स्वभाव त्यसैका धोखापूर्ण इच्छाहरूले त्यसलाई थोत्रो बनाइसकेका छ।
24 ... तिमीहरू नयाँ मानिस बनिनु पर्छ जस्तो विश्वास अनुसार धर्मी र पवित्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा सिर्जनु भएको छ।
9. 1 कोरिन्थी 15 : 45, 47-51
45 धर्मशास्त्रमा जस्तो लेखिएको छः प्रथम मानिस एउटा जीवित थोक भयो। तर अन्तिम आदम आत्मा भयो जसले जीवन दिन्छ।
10. रोमी 13 : 11 (अब)-14
11. 1 यूहन्ना 3: 2, 3
ईश्वरीय विज्ञान मा, मानिस भगवान को साँचो छवि हो। ईश्वरीय प्रकृति सबैभन्दा राम्रो ख्रीष्ट येशू मा व्यक्त भएको थियो, जसले परमेश्वर को वास्तविक प्रतिबिम्ब मर्नेहरु लाई फ्याँक्नुभयो र उनीहरुको जीवन लाई उनीहरुको गरीब बिचार-मोडेल लाई अनुमति दिनु भन्दा माथि उठाउनुभयो,-विचार जसले मानिसलाई पतन, बिरामी, पाप, र मर्ने को रूप मा प्रस्तुत गर्दछ।
जो पनी मानिस को पतन वा भगवान को विपरीत वा भगवान को अनुपस्थिति को संकेत गर्दछ, आदम सपना हो, जो न त मन छ, न मानिस, किनकि यो पिता को जन्म भएको छैन।
एडम नाम झूटा अनुमान को प्रतिनिधित्व गर्दछ कि जीवन अनन्त छैन, तर सुरु र अन्त छ; कि अनन्त सीमित मा प्रवेश गर्दछ, कि बुद्धि गैर बुद्धि मा जान्छ, र आत्मा भौतिक अर्थ मा बस्छ; त्यो अमर मन को मामला मा परिणाम, र नश्वर दिमाग मा कुरा; कि एक ईश्वर र सृष्टिकर्ताले के सृष्टि गर्नुभयो, र त्यसपछि पदार्थ को नास्तिकता मा गायब भयो।
यो त्रुटि आफैंमा एक त्रुटि साबित भएको छ। यसको जीवन जीवन होईन, तर मात्र एक क्षणिक, एक अस्तित्व को गलत अर्थ हो कि मृत्यु मा समाप्त हुन्छ।
मानिस भौतिक आधार बाट बनेको थिएन, न त भौतिक कानून को पालन गर्न को लागी आदेश दिइएको थियो जुन आत्माले कहिल्यै बनाएको थिएन; उनको प्रान्त आध्यात्मिक कानून मा छ, मन को उच्च कानून मा।
त्रुटि को भयानक दिन, कालोपन, र अराजकता को माथि, सत्य को आवाज अझै पनी बोलाउँछ: "एडम, तिमी कहाँ छौ? के तपाइँ जीवित विश्वासमा हुनुहुन्छ कि त्यहाँ एक मात्र भगवान हुनुहुन्छ, र उहाँको आज्ञा पालना गर्न सक्नुहुन्छ? " जब सम्म पाठ यो थाहा हुन्छ कि भगवान मात्र मन शासन गर्ने मानिस हो, नश्वर विश्वास डरलाग्दो जस्तै यो शुरू मा थियो, र माग बाट लुक्नेछ, "तिमी कहाँ छौ?" यो भयानक माग, "आदम, तिमी कहाँ छौ?" टाउको, मुटु, पेट, रगत, नसा, आदि बाट प्रवेश द्वारा भेटिएको छ: "लो, म यहाँ छु, शरीर मा खुशी र जीवन को लागी खोजिरहेको छु, तर केवल एक भ्रम, झूटा दावीहरु को एक मिश्रण, झूठो खुशी को खोज , पीडा, पाप, रोग, र मृत्यु। "
5. 250 : 6-11 (लाई 2nd .), 22-25
नश्वर अस्तित्व एक सपना हो; नश्वर अस्तित्वको कुनै वास्तविक अस्तित्व छैन, तर भन्छन् "यो म हुँ।" आत्मा अहंकार हो जुन कहिल्यै सपना देख्दैन, तर सबै कुरा बुझ्दछ; जो कहिल्यै गल्ती गर्दैन, र कहिल्यै सचेत हुन्छ; जो कहिल्यै विश्वास गर्दैन, तर जान्दछ; जो कहिल्यै जन्मिदैन र कहिल्यै मर्दैन। आध्यात्मिक मानिस यो अहंकार को समानता हो।
अब म सोध्छु, के सुत्ने सपना भन्दा मर्ने अस्तित्व को जाग्ने सपना मा कुनै वास्तविकता छ? त्यहाँ हुन सक्दैन, किनकि जे होस् एक नश्वर मानिस देखिन्छ एक नश्वर सपना हो।
यी नश्वर सपनाहरु मानव मूल को हो, दिव्य हैन।
झूटो विश्वास छ कि आत्मा अब पदार्थ मा डुबेको छ, केहि भविष्य को समयमा यो बाट मुक्त हुन को लागी, - यो विश्वास मात्र नश्वर छ। आत्मा, भगवान, कहिल्यै अंकुरित छैन तर "उही हिजो, र आज, र सधैंभरि।" यदि मन, भगवान, त्रुटि सिर्जना गर्दछ, त्यो त्रुटि ईश्वरीय मन मा अवस्थित हुनुपर्दछ, र त्रुटि को यो धारणा देवता को पूर्णता लाई पराजित गर्दछ।
ईसाई विज्ञान विरोधाभासी छ? के सृष्टिको ईश्वरीय सिद्धान्त गलत छ? के भगवान दिमाग को घोषणा गर्न को लागी कुनै विज्ञान छैन, जबकि पदार्थ बुद्धि द्वारा शासित छ? "त्यहाँ पृथ्वी बाट एक धुवाँ माथि गयो।" यो एक भौतिक आधार मा राम्रो को एक विचार बाट शुरू को रूप मा त्रुटि को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो भगवान र मनुष्य को केवल शारीरिक इन्द्रियहरु को माध्यम बाट प्रकट हुन को लागी मानिन्छ, यद्यपि भौतिक इन्द्रियहरु आत्मा वा आध्यात्मिक विचार को कुनै संज्ञान लिन सक्दैनन्।
नश्वर जीवन मा मानव अनुभव, जो एक अण्डा बाट शुरू हुन्छ, अय्यूब संग मिल्दोजुल्दो छ, जब उनी भन्छन्, "एक महिला बाट जन्मेको मानिस केहि दिन को हुन्छ, र समस्या बाट भरिएको हुन्छ।" मर्नेहरु भौतिक जीवन को यस धारणा बाट सबै मा सबै को रूप मा बाहिर आउनु पर्छ। तिनीहरूले क्रिश्चियन विज्ञान संग आफ्नो गोला खोल्नु पर्छ, र बाहिर र माथी हेर्नु पर्छ।
एक भौतिक स्रोत बाट दु: ख, पाप, र मृत्यु को लागी कुनै उपाय छैन, उद्धार गर्ने शक्ति को लागी, उनीहरु अवसरहरु बाट, अण्डा मा छैन र धुलो मा छैन। … यस प्रकार यो थाहा छ कि मामला नश्वर दिमाग को एक अभिव्यक्ति हो, र त्यो कुरा सधैं आफ्नो दाबी समर्पण गर्दछ जब सिद्ध र शाश्वत मन बुझिन्छ।
ईश्वरीय विज्ञानले भ्रम को मूल मा कुर्सी राख्छ कि जीवन, वा दिमाग, भौतिक शरीर द्वारा बनाईएको हो वा हो, र विज्ञान अन्ततः सबै भ्रम को आत्म-विनाश र को विज्ञान को सुन्दर समझ को माध्यम बाट यो भ्रम नष्ट हुनेछ। जिन्दगी।
जब नश्वर दिमाग को धुवाँ वाष्पीकरण हुन्छ, श्राप हटाइनेछ जो महिला लाई भन्छ, "दु: ख मा तपाइँ बच्चाहरु लाई जन्म दिनुहुनेछ।" ईश्वरीय विज्ञान सत्य को प्रकाश संग त्रुटि को बादल फिर्ता रोल, र मानिस मा पर्दा उठाउँछ कहिल्यै जन्मेको रूपमा र कहिल्यै मर्ने को रूप मा, तर आफ्नो सृष्टिकर्ता संग सहअस्तित्व को रूप मा।
पावलले भने, "आत्मामा हिँड्नुहोस्, र तपाइँ शरीरको वासना पूरा गर्नुहुन्न।" चाँडै वा पछि हामी जान्दछौं कि मानिसको सीमित क्षमताको बन्धन भ्रम द्वारा बनाइएको छ कि ऊ आत्माको सट्टा शरीरमा, आत्माको सट्टा शरीरमा बस्छ।
12. 230 :4(को)-10
... यस नश्वर सपना, वा भ्रम बाट जागृति, हामीलाई स्वास्थ्य, पवित्रता, र अमरता मा ल्याउनेछ। यो जागरण सदाको लागी ख्रीष्टको आगमन हो, सत्य को उन्नत प्रकट, जो त्रुटि बाहिर निकाल्छ र बिरामीहरुलाई निको पार्छ। यो मुक्ति हो कि भगवान, ईश्वरीय सिद्धान्त, प्रेम को माध्यम बाट आउँछ, येशू द्वारा प्रदर्शन गरीएको छ।
13. 171 : 4-8 (लाई 4th ,)
भौतिकताको आध्यात्मिक विरोधाभास को माध्यम बाट, ख्रीष्ट को माध्यम बाट, सत्य को माध्यम बाट, मानिस दिव्य विज्ञान को कुञ्जी संग स्वर्ग को ढोका जुन मानव विश्वास बन्द गरीएको छ, र आफैंलाई अपूर्ण, सीधा, शुद्ध, र स्वतन्त्र पाउनुहुनेछ,